Olima Dayz mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Olima Dayz mbanye anataghị ikike
Anyị DayZ Olima mbanye anataghị ikike, ị nwere ike imeri ma zombies na egwuregwu!
Nweta ohere kacha mma nke ego nwere ike ịzụta, ebe a! Zụta Ihe Ngwaahịa -bọchị 1!
Gamepron bụ onye na - eweta DayZ Hacks na ntanetị maka ebumnuche - chazụta Key Key Key Key 1!
Nwere ike ịnweta ụzọ dị ogologo karị ma ọ bụrụ na ị họrọ ime otu a! Keyzụta igodo ọnụ ahịa ọnwa 1!
DayZ ga-atụpụrụ gị ọtụtụ ihe, nke nwere ike iyi ihe karịrị akarị maka ndị egwuregwu ọhụụ. Ma ị na-ọhụrụ na egwuregwu ma ọ bụ dị nnọọ mkpa ntakịrị “agbam ume”, i nwere ike ịdabere na anyị DayZ Olima mbanye anataghị ikike ịnapụta! Nweta enyemaka ị chọrọ site na GamePron.
Dayz Olima mbanye anataghị ikike Ozi
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Virtualization bụ ihe dị mkpa maka mgbe ịchọrọ iji ụdị Olima nke hacks anyị, ọbụlagodi ụbọchị Dayz Cheats. Iji anyị DayZ Olima mbanye anataghị ikike bụ zuru okè n'ụzọ na-aka gị na Ndị aghụghọ na-agaghị ebibi gị fps, dị ka ọ bụghị mmadụ nile na-arụ ọrụ na kọmputa dị ike maka egwu egwuregwu. Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa “adịghị ike” ma ọ bụ na ị chọrọ nwere kasị elu fps kwere omume, iji anyị DayZ Olima mbanye anataghị ikike ga-arụ ọrụ ebube! Can nwere ike ịmalite egwuregwu ahụ na Steam ma ọ bụ Guzoro Naanị ma ka na-eji DayZ Hack.
DayZ Wallhack anyị na-enye Onye Iro na Nkebi ESP, yana ozi ESP (dị ka Anya, Skeleton, Clothing, Weapons, Ammo, Food, and Medicine). DayZ Aimbot dịkwa ịtụnanya ma nwee ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na, dị ka Ọkpụkpụ Prioritization na Kemeghi FOV gburugburu. Hụ ọganihu na Gamepron!
Ama iro (Anya, Zombies, ọnọdụ)
Nkebi ESP (Anya, Uwe, Ngwá Agha, Ammo, Nri, Ahụike, entslọikwuu, Ọgba)
Aimbot (Anya, Igodo, Ọkpụkpụ)
Banyere Dayz Olima
Anyị DayZ Olima mbanye anataghị ikike dị nnọọ mma karịa ọtụtụ ndị ọzọ DayZ Hacks na ahịa ugbu a, na nke ahụ bụ n'ihi ọrụ niile anyị tinyeworo na ya. Anyị chọrọ iji hụ na a eji Aghọ Aghụghọ Ule dị nnọọ mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ niile nke anyị novice ọrụ, n'ihi ya, ọ bụ nnọọ mfe iji - ị nwekwara ike enuba mgbe a mbanye anataghị ikike na-nyeere, dị ka ndị na-ekiri gị agaghị enwe ike ịhụ ndị aghụghọ nyeere. DayZ Hack bụ Mpụga na ị ga-achọ gbanyụọ nchedo iji ya, ma ọ bụghị ụgha ọkọlọtọ nwere ike igbochi akụrụngwa ịrụ ọrụ.
Gini kpatara iji Dayz Olima nye ndi ozo?
E nweghị egwuregwu n'ihi na àgwà hụrụ ebe a na Gamepron, na na ihe mere anyị ọrụ na-agaghị na-achọ ebe ọzọ n'ihi na ha DayZ mbanye anataghị ikike mkpa. Mgbe ị nwalere ngwa ọrụ anyị ma ị ghọta ụdị mma anyị ga-enye, ọ nweghị ihe kpatara ị ga-eji chọọ ebe ọzọ! Pụrụ ọbụna igwu egwu DayZ na ihuenyo na anyị DayZ Olima mbanye anataghị ikike ọrụ, nke ọtụtụ ndị na enye enweghị ike ịnapụta onwe ha. Akaụntụ gị bụ mgbe mma mgbe ị na-arụ ọrụ na hacks si Gamepron, dị ka ihe niile anyị na Ndị aghụghọ na-adịghị achọpụta na-enyere gị aka izere mmachibido iwu ọ bụla oge.
Jiri nchịkọta egwuregwu egwuregwu anyị na-enweghị mmerụ iji mee mgbanwe ndị ịchọrọ ịhụ kacha! Youkwesighi idozi maka ntọala ngwaahịa anyị nwere maka DayZ Olima mbanye anataghị ikike, ebe ị nwere ike ịme ihe n'aka gị - iji menu egwuregwu na-enye gị ohere ịme mgbanwe niile na DayZ Olime anyị. Njirimara anataghị ikike. Nwere ike ịgbanwe etu Aimbot ga-esi chụso ndị iro ọsọ, ma ọ bụ sọsọ gbanwee nke nhọrọ ESP ị ga-ahụ na ihuenyo gị. Ọnụ ọgụgụ nke nhọrọ yiri ka enweghị ngwụcha, ya mere jiri egwuregwu na-egwu egwu ma chọta ngwakọta zuru oke!
A1. Nke a cheat dị mfe ma dị mfe iji. Chọrọ aha na Loader. Naanị soro "otu esi eji"
A6. Ee, ọ na-akwado mode nju ihuenyo.
A na-arụ ọrụ anyị niile ka anyị ghara ịchọpụta n'oge eji ya, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara iwu machibidoro gị. Nchebe bụ ihe kacha mkpa mgbe ị na-ahọrọ mbanye anataghị ikike na GamePron!
Agbaji ebu na mbanye anataghị ikike na DayZ smart ụzọ! Zụta igodo taa
Njikere Na-achị na anyị Dayz Olima mbanye anataghị ikike?